Qaybaha Shiinaha ee Jet Mil warshad iyo soosaarayaasha | Qiangdi
1.sareynta banaanka, ka ilaali maaddada inay soo gasho gudaha, ka dibna macaanka. 2.valve iyo xudunta waalka waa qaybo ridaya, wax isbeddel ah malaha isticmaalka muddada dheer ka dib. Habka 3.CNC wuxuu hubiyaa saxsanaanta wanaagsan.
1.sareynta banaanka, ka ilaali maaddada inay soo gasho gudaha, ka dibna macaanka.
2.valve iyo xudunta waalka waa qaybo ridaya, wax isbeddel ah malaha isticmaalka muddada dheer ka dib.
Habka 3.CNC wuxuu hubiyaa saxsanaanta wanaagsan.
Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Labaad
DSH isku-darka isku-shaandheeyaha isku-darka ah wuxuu isku daraa budada, granule iyo isku-darka dareeraha. Wareegga mashiinka isku-shaandheynta mataanaha waxaa lagu dhammaystiray qaybo matoorro ah iyo kuwa yareeya cycloid. Iyada oo la isku qasinayo asymmetric-ka oo ay yeelanayaan laba boolal, xaraashka walaaqaya ayaa la ballaadhin doonaa xawaaraha kicintana waa la dedejin doonaa. Mashiinka isku dhafan waxaa dallacsiinaya laba meerisyo asymmetric ah oo si dhakhso leh u wareegaya, oo sameysmaya laba tiir oo wareeg ah oo aan isle'eg ahayn oo kor uga socda darbiga silsiladda. Gacanta leexashada ee uu ku wareego wareegga wareegga, waxay ka dhigaysaa maaddada wareegga ah ee heerarka kala geddisan galka baqshadda, qaybta kala-baxa ee maaddada la dallacayo, qaybta kale ee maaddada lagu tuurayo, si markaa loo gaaro qalabka wareegga wareegga oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo. Labada shay ee kor ku xusan ayaa markaa dib loogu soo celinayaa godka isku-xidhka ee xarunta, iyagoo samaynaya hoos u dhac xagga alaabta ah isla markaana kaabaya godka hoose, sidaasna ku samaynaya wareegga wareegga.
1. Isku-darka isu-tagga
Waqti yar oo isku dar ah 5-15 daqiiqo
Dheecaan nadiif ah & haraaga oo aan harsan
Waalka dheecaanka 4.Central:
Elektiroonig, pneumatic, buug (ikhtiyaar)
Ball waalka, waalka fidsan, waalka iridda mindi, balanbaalis balan (ikhtiyaar)
5.Main shaft seal: seal Stuffing iyo shaandhada nadiifinta hawada
6.Drive: Siemens motor, cycloid ama hoos u dhigga qalabka
7.Limit / bedelka badbaadada (ikhtiyaar)
8. Kululaynta / qaboojinta jaakada ikhtiyaari ah)
1.Qiyaasta wax lagu dabaqi karo ee saboolka ah, walxaha budada ah waa qalab aad u ballaaran;
2.Waxay ku habboon tahay isku-dhafka dhaldhalaalka dhoobada ah ee geeddi-socodka jilicsan, walxaha maaddadu ma cadaadinayaan-ama jabaan;
3.Waxyaabaha kulaylka xasaasiga u ah ma kululaan doono;
4.Boorka - geedi socodka isku darka budada ayaa ah mid aad u fudud in lagu daro xaaladaha shaqada ama siinta dareeraha tirada badan ee dariiqa laga buufiyo;
5. Qalabka hoose ee kala-baxa wax ku habboon, maaddaama hoose ee muquuninta aan la isku dhejin karin, sidaas darteed ma jirto xaalad cadaadis la siinayo
Miisaanka muquuninta muraayadaha muquuninta ah
Waxqabadka & qaababka:
1. Waxyaabaha: birta aan xarka lahayn 304 / 316L ama bir khafiif ah Q235;
2. Daaweynta dusha sare: rinjiga (bir khafiif ah), dhalaal / sandblasting (bir bir ah);
3. Ribbon agitator: lakabyo labalaab ah & jihooyin laba jibaaran;
4. Taangiyada wax lagu qaso: jiifka, taangiga U-qaabeeya;
5. Shaft: jiif, godad, hal usheeda dhexe hal;
6. Waqti isku qasid: 5-15 daqiiqo;
7. Moodal shaqeynaya: isku-darka dufcadaha;
8. Speed ​​reducer: hoos u dhigga cycloid;
9. Xawaaraha wareega: xawaaraha go'an;
10. Khatimidii ugu weyneyd: (Teflon) shaabad wax lagu buuxiyo ama shaabad nadiifinta hawada;
11. Furitaanka: quudinta godka laga galo, godka godka, iyo dekedda kormeerka / isku xidhka;
12. Dheecaanka dheecaanka: pneumatic ama waalka dheecaanka buuga gacanta;
13. Xaaladda shaqada: NPT (cadaadiska caadiga ah iyo heerkulka);
14. Ma aha shaqo culus: qasid laguma bilaabi karo qalabka wax lagu raro;
15. Awood siinta: 220V 50HZ hal waji / 380V 50HZ 3 waji;
16. Qalabka korontada ee aan hore u caddayn (matoor, walxaha elektarooniga ah, kabadhada xakamaynta);
Hore: Fasalka Jet Micron ee Kala-soocida
Xiga: LSM Vertical Wet Stirring Mill